Qorshayaasha Kate: Beddelidda midabada KATE | Laga soo bilaabo Linux
Kate waa tifaftiraha qoraalka sare ee mashruuca KDE SC, iyo marka la barbardhigo qaar ka mid ah barnaamijyada la midka ah ee ka jira Degaanada kale ee Desktop, waxay u dhowdahay sida IDE, oo ay ka buuxaan xulashooyin iyo shaqeyn. Laakiin iska jir, waa uun tifaftire qoraal.
Markaan ufureyno Kate asal ahaan waxaan helnaa wax sidan oo kale ah:
Si kastaba ha noqotee waxaan rakibi karnaa qaabab (ama qorshayaal) si aan kor ugu qaadno muuqaalka Kate ama aan uga caawinno aragtidayada xoogaa. Dhab ahaantii Kate wuxuu leeyahay nidaamyo midab asal ah laakiin anigu si gaar ah uma jecli iyaga. Marka bal aan aragno sida loo rakibo kuwa kale Qorshayaasha Kate.
Ku rakibidda Qorshayaasha Kate
Degso Habeen Buluug ah
Soo dejiso Parchment
Markaan soo dejino mid ka mid ah feylashaan, si aan ugu dabaqno qaabka ay tahay inaan sameyno ayaa ah inaan aadno Xulashada » U habee Kate » Noocyada Waraaqaha iyo Midabbada oo dhagsii badhanka oranaya Si aad u soo dhoofiso ...
Waxaan doorannaa feylka la soo dejiyey oo na weydiin doona haddii aan dooneyno inaan beddelno qorshaha hadda jira, kaasoo dabcan aan dhahno haa. Waxaan codsaneynaa isbedelka waana intaas. Wax badan oo ku saabsan qorshayaasha loogu talagalay Kate.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Qorshayaasha Kate: Beddelida Midabada KATE
Mawduuc OFF: Maxay tahay nooca aad isticmaashay ee ah midka ka muuqda shaashadaha?
Adeegso shaashadda KDE, oo leh Alt + PrintScr, oo maamusha sameynta shaashadda daaqadaha.
Mahadsanid, laakiin waxaan ula jeeday font-ka ka muuqda shaashadda shaashadda:
Hadaad ula jeedo isha arjiga, waa Droid Sans.
Haa, taasi waa sida saxda ee aan ula jeeday. Mahadsanid 😀
Ztarrk 7 dijo
Waxaa lagu rakibay mawduuca Baaraynta, waxay ka dhigeysaa tifaftiraha mid kafiican; Mar dambe iskama sii fogeynin Kate.
Suurtagal ma tahay in la ogaado mawduuca iyo midabada KDE ee aad isticmaasho?
Nidaamyo aad u wanaagsan inkasta oo aan doorbido nooca "Moka", kuwan ayaan soo dejiyaa iyaga ... waad ku mahadsan tahay @elav wadaagga iyaga! :]